नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई स्थानीय तहमा विजयी गराउनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरीएको छ। बैशाख ३० गते हुन गई रहेको स्थानीय निर्वाचनमा साँफेबगर नगरपालिकामा सबै उम्मेदवारलाई विजयी गराउन निर्वाचन परिचालन, समन्वय कमिटी गठन गरीएको हो।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख प्रकाश शाहको संयोजकत्वमा चार जना सदस्य रहने गरी कमिटी गठन गरीएको हो। कमिटीका सदस्यहरुमा बल बहादुर कुँवर, बालगिरी कुँवर, चक्र शंकर भुल, मनोज रावल रहनु भएको छ। कमिटीको सल्लाहकारमा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य गोविन्द बहादुर कुँवर (हर्क) रहनु भएको छ।
यस्तै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई स्थानीय तहमा विजयी गराउन बसेको बैठकले अन्य नौ वटा उपसमितिहरु पनि गठन गरेको छ। बैठकले पुष्पराज भट्ट संयोजक रहने गरी पाँच जनाको प्रचार–प्रसार समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा सागर सिंह बाब्ली, एकेन्द्र महता, रमेश परियार, कल्पना बोहरा, मिन बाब्ली रहनु भएको छ। समितिको सल्लाहकारमा जंग बि.क. रहनु भएको छ।
बैठकले तेज बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय यातायात व्यवाश्थापन समिति गठन गरेको छ। ढकेद्र कुँवर, प्रेम बि.क. सदस्य रहनु भएको समितिको सल्लाहकार दिपक सुनार रहनु भएको छ। यस्तै हिरिण्ड कुँवरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय युवा परिचालन समिति गठन गरीएको छ। समितिका सदस्य रबिन्द्र बहादुर शाह, राज कुँवर, भिम बडाहित रहनु भएको छ। समितिको सल्लाहकार दिपक सुनार रहनु भएको छ। बैठकले महिला नेतृ राधिका भुजेलको संयोजकत्वमा महिला परिचालन समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा सिता कुँवर, भगवति कुँवर, रामप्यारी कुँवर, अम्बीका कुँवर, हेमा नागरी यशोदा कुमाल लगाएतका सदस्य रहनु भएको छ। महिला परिचालन समितिको सल्लाहकार जयन्द्र स्वार रहनु भएको छ।
यस्तै बालगिरी कुँवरको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति गठन गरीएको छ। समितिको सदस्यमा ललित कुँवर, ललित नेपाली, ललित बोगटी, गणेश कुँवर, सिता कुँवर, राजेन्द्र कोली रहनु भएको छ। आर्थिक व्यवस्थापन समितिको सल्लाहकारमा मिन बहादुर कुँवर रहनु भएको छ। बैठकले चक्र सुनारको संयोजकत्वमा सांस्कृतिक समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा कविन्द्र परियार, बिक्रम बि.क., तकत कुँवर, भिम बि.क. रहनु भएको छ। समितिको सल्लाहकारमा टेकराज कुँवर रहनु भएको छ।
यस्तै झंकर बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा प्रचार सामाग्रि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। समितिको सदस्यमा दिपक सुनार, सुरत भुल रहनु भएको छ। समितिको सल्लाहकारमा देव बहादुर कुँवर रहनु भएको छ। बैठकले आकाश कुँवर संयोजक रहने गरी प्रवास समन्वय समति पनि गठन गरेको छ। समितिका सदस्यमा रमेश कुँवर, बि.एस. ओड, प्रेम खड्का, मुकेश कुँवर र जय सिंह आउजीलाई चयन गरीएको जनाईएको छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १४, २०७९ १३:१२